admin,3years ago6min read 8
आगामी २०७६ साल कार्तिक २३ गते शनिबार दिउँसो ११ बजेदेखि शब्दयात्रा प्रकाशनले सम्मान समर्पण तथा पुस्तक सार्वजनिकीकरण समारोहको आयोजना गर्दैछ । धुलिखेलस्थित हिमालयन प्याराडाइज होटलमा आयोजना गरिने उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, सम्मानित व्यक्ति तथा संस्था, सार्वजनिक गरिने कृतिका कृतिकार, चयन समितिका सदस्यको चिनारी र अन्य केही जानकारीहरू विशेष पृष्ठमा प्रस्तुत गरिएको छ । सम्मानित व्यक्तिहरूको तस्बिर आगामी अङ्कको समाचारमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
प्रमुख अतिथि सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ साह«ै शिष्ट र विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको सुदूर पूर्व ताप्लेजुङ दोभानको याङमान बजारमा गणेशकुमारी र लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठका सुपुत्रका रूपमा १९९४ सालमा जन्मनुभयो । दुःखसुख राम्ररी पढ्नुभयो । सङ्खुवासभाको चैनपुरमा ७ कक्षासम्म पढ्नुभयो । त्यसपछि बनारसबाट १५ वर्षको उमेरमा म्याट्रिकुलेसन पास गर्नुभयो । २०१४ सालमा बीए पास गरेर ग्रामविकास विभागमा सहायक प्रचार अफिसर पदमा जागिर सुरु गर्नुभयो । तीन महिनामा बढुवा हुनुभयो कायम मुकायम प्रचार अफिसरमा । २०१६ सालमा सेक्सन अफिसर बन्नुभयो । २०१८ सालमा सरकारी छात्रवृत्तिमा बेलायतमा पढ्न जान पाउनुभयो । त्यहाँको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन विषयमा पोस्ट ग्राजुएट गर्नुभयो । जागिर सुरु गरेको ५ वर्षमै २०२१ सालमा सेकेन्ड क्लास अफिसर बन्नुभयो । २०२९ सालमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति भई बागमती अञ्चलको सहअञ्चलाधीश पदमा जानुभयो । त्यहाँ काम गर्दागर्दै ३ वर्षको छोटो अवधिमै २०३२ सालमा राजनीतिक पदका रूपमा बागमती अञ्चलको विशिष्ट श्रेणीको अञ्चलाधीश पदमा बढुवा भई संवैधानिक निकायको प्रमुख हुनुभयो । त्यसपछि गृहसचिव, उद्योग–वाणिज्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसदस्य बनेर २०४१ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्नुभयो र सङ्कटकालमा पनि राम्रोसँग चुनाव सफल पार्नुभयो । त्यो काम सिद्धिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँलाई फ्रान्सको राजदूत बनाउन खोज्नुभयो । तर ‘म त्यहाँ जान्नँ’ भन्नुभयो । ‘कहाँ जानुहुन्छ त ?’ भनेर सोद्धा ‘म बेलायतमा जान्छु, किनभने मैले बेलायतमा पढेको र त्यहाँका धेरै कुरा जानेको’ भन्नुभयो । त्यसपछि उहाँलाई चार महिना कुराएर बेलायतको राजदूत बनाइयो । राजदूत पनि छानी–छानी पाउने मान्छे उहाँ नै हो । राजदूतबाट हटेपछि उहाँ विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा सक्रिय हुनुभयो । आफ्नी श्रीमती गिन्नीबाबा श्रेष्ठको निधन २०७४ सालमा भएपछि ८२ वर्षको उमेरमा उहाँले एकल पुरुषका रूपमा जीवन बिताउनुपरेको छ । अझै पनि उहाँ सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ । (द्रोणप्रसाद श्रेष्ठको मन्तव्य, ‘शब्द र चित्रमा द्रोणप्रसाद श्रेष्ठ’ पुस्तिकाबाट)
सम्मान गरिने व्यक्ति तथा संस्थाहरू
डा. केदारनाथ श्रेष्ठ ः
डा. केदारनाथ श्रेष्ठ शिक्षा क्षेत्रका अग्रज सेवी हुनुहुन्छ । उहाँको निवास ललितपुरको सानेपामा रहेको छ । अमेरिकाको साउदर्न इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट शिक्षा विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका उहाँले शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न अनुभवहरू बटुल्नुभएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा सङ्कायका डिन भइसक्नुभएका उहाँ शिक्षा मन्त्रालयमा निमित्त सचिव पनि हुनुभएको छ । नेपाल सरकारका साथै युनेस्को, यूएनडीपी आदिमा पनि उहाँले सेवा गर्नुभएको छ । शैक्षिक योजना र शैक्षिक व्यवस्थापनको विज्ञका रूपमा उहाँ सुपरिचित हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुभएका उहाँले शिक्षा क्षेत्रका पुस्तकहरू र लेखहरू पनि लेखेर प्रकाशन गराउनुभएको छ । उहाँजस्ता शिक्षासेवी व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न पाउँदा शब्दयात्रा प्रकाशन गौरवान्वित बनेको छ ।
ध्रुवहरि अधिकारी ः
ध्रुवहरि अधिकारी नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । नेपालको स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि उहाँको प्रसिद्धि रहेको छ । उहाँ विभिन्न देशका सञ्चार माध्यमहरूका नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा समेत चिनिनुहुन्छ । उहाँ स्वतन्त्र लेखन पनि गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न पत्रिकाहरूमा नेपालको राजनीति र समाजसँग सम्बन्धित उहाँका विश्लेषणात्मक लेख तथा टिप्पणीहरू प्रकाशित भएका छन् । उहाँले पुस्तकको लेखन र सम्पादनसमेत गर्नुभएको छ । नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट जस्ता संस्थाहरूमा आबद्ध रहनुभएका उहाँ अचेलका सक्रिय युवा पत्रकारहरूका गुरु पनि हुनुहुन्छ र अझै पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । ओखलढुङ्गा पुख्र्यौली घर भए पनि उहाँ हाल ललितपुरको झम्सिखेलमा बसोवास गर्नुहुन्छ । उहाँजस्ता सञ्चारविज्ञ व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न पाउँदा शब्दयात्रा प्रकाशन गौरवान्वित बनेको छ ।
टीपी शर्मा तिमिल्सिना ः
पत्रकार तथा लेखकका रूपमा सुपरिचित व्यक्तित्व टीपी शर्मा तिमिल्सिना काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको भकुन्डे बुचाकोटका बासिन्दा हुनुहुन्छ । विशेषतः पोल्ट्री विधाको पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयसम्म सक्रिय रहनुभएका उहाँले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका टिप्पणीहरू पनि लेख्ने गर्नुभएको छ । उहाँका लेखहरू विभिन्न पत्रिकाहरूमा छापिएका छन् । ‘नेपालभूमि राष्ट्रिय साप्ताहिक’ मा पनि उहाँका लेख तथा कविताहरू धेरै सङ्ख्यामा प्रकाशित भएका छन् । बौद्धिकतापूर्ण गम्भीर लेखन उहाँको विशेषता हो । पत्रकारिता जगत्मा सबैका प्रिय व्यक्तित्वका रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ । हाल उहाँ काभ्रेपलान्चोक जिल्ला नमोबुद्ध नगरपालिकाको नगरप्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । ‘नेपालभूमि राष्ट्रिय साप्ताहिक’ मा स्तम्भकार बनेका व्यक्तित्वलाई समर्पण गरिने सम्मान उहाँजस्ता व्यक्तित्वलाई समर्पण गर्न पाउँदा शब्दयात्रा प्रकाशन गौरवान्वित बनेको छ ।
राजेन्द्र चित्रकार ः
राजेन्द्र चित्रकार प्रसिद्ध फोटो पत्रकार हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म गोरखापत्र संस्थानअन्तर्गत सेवा गर्नुभएका उहाँ फोटो पत्रकारहरूका संस्थाहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । काठमाडौँमा जन्मनुभएका उहाँले फोटो पत्रकारितासम्बन्धी तालिम लिनु पनि भएको छ र दिनु पनि भएको छ । उहाँले खिच्नुभएका तस्बिरहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका छन् । शब्दले व्यक्त गर्न नसक्ने भाव चित्रमा उतार्न सक्नु उहाँको विशेष खुबी हो । त्यसैले उहाँले विभिन्न देशको भ्रमण गर्न पाउनुभएको छ र सम्मानित पनि हुनुभएको छ । उहाँको फोटोग्राफीबाट प्रेरित बनेर नयाँ पुस्तामा विभिन्न फोटो पत्रकारहरू देखापरेका छन् । उहाँजस्ता फोटो पत्रकारलाई सम्मान गर्न पाउँदा शब्दयात्रा प्रकाशन गौरवान्वित बनेको छ ।
भक्तिदर्शन टेलिभिजन ः
आध्यात्मिक क्षेत्रको नेपालको एक मात्र टेलिभिजनका रूपमा भक्तिदर्शन टेलिभिजन आम नेपालीका बीचमा सुपरिचित छ । यस टेलिभिजनका आदर्श जीवन, मन्दिरदर्शन, भक्तिदर्शन, सुन्दर बिहान, कुण्डली दर्पण, तपाईंको भोलि, भजन सागर, हरेकृष्ण भक्तिलोक आदि कार्यक्रमहरू अत्यन्त लोकप्रिय रहेका छन् । पाश्चात्य जगत्का अनेकानेक क्रियाकलापहरूबाट प्रेरित बनेर आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिकता आदि बिर्संदै गएको र भौतिकतामा मात्रै रङमङिन लागेको युवा जमातलाई सच्चरित्रता, नैतिकता, आदर्श र पूर्वीय आध्यात्मिक दर्शनको पाठ पढाउन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको अहम् भूमिका रहेको छ । नेपालीलाई कर्तव्यपरायणता र आस्तिक भावधारातिर ढाल्न यसले खेलेको भूमिका स्मरणीय र अनुकरणीय रहेको छ । यस्तो सञ्चार माध्यमलाई सम्मान गर्न पाउँदा शब्दयात्रा प्रकाशन गौरवान्वित बनेको छ ।
नवप्रज्ञापन (त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका) ः
काठमाडौँबाट विगत २५ वर्षअघिदेखि ‘नवप्रज्ञापन’ नामक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित भइरहेको छ । यो पत्रिका प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा ‘क’ श्रेणीमा परेको छ । नवराज रिजालको सम्पादनमा प्रकाशन भइरहेको यस पत्रिकाले नयाँ–नयाँ साहित्यकारहरूलाई जन्म दिन, नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, पुरानो पुस्ताका साहित्यकारहरूसँग नयाँ पुस्ताको मिलन गराउन, विविध विधाका रचनाहरूलाई पाठकसमक्ष पु¥याउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । बालसाहित्य विशेषाङ्क, भानुभक्त विशेषाङ्क, छन्दकविता विशेषाङ्क, मुक्तक विशेषाङ्क, बहुभाषा कथा विशेषाङ्क आदिजस्ता अनेक विशेषाङ्कहरू प्रकाशन गरेर यस पत्रिकाले नेपाली भाषा–साहित्य र साहित्यिक पत्रकारिताको विकासमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ । यस्तो साहित्यिक पत्रकालाई सम्मान गर्न पाउँदा शब्दयात्रा प्रकाशन गौरवान्वित बनेको छ ।
सम्मान्य व्यक्तित्व चयन समिति
नाम ः पदम दाहाल (प्रसिद्ध साहित्यसेवी तथा शिक्षासेवी)
जन्म र जन्मस्थान ः २०११ साल कार्तिक १८ गते, पाटीगाउँ, मादी न. पा. — ६, सङ्खुवासभा
हालको बसोवास ः मध्यपुर ठिमी न. पा. — १, लोकन्थली, भक्तपुर
शैक्षिक योग्यता ः एमए (राजनीतिशास्त्र), एमएड (नेपाली)
प्रकाशन ः बादलका तरेलीहरू (कवितासङ्ग्रह), विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखरचना प्रकाशित
विशेष अनुभव ः लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध
नाम ः पशुपतिमान पःमाँ (प्रधान) (प्रसिद्ध साहित्यसेवी तथा शिक्षासेवी)
जन्म र जन्मस्थान ः १९९४ साल असार १४ गते, योगाटोल, जगाती, भक्तपुर
हालको बसोवास ः जगाती, भक्तपुर
शैक्षिक योग्यता ः बीए, बीएड
प्रकाशन ः नुगः घाः, श्रीस्वस्थानी व्रतकथा लगायत आधा दर्जन, विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखरचना प्रकाशित
विशेष अनुभव ः लामो समय शिक्षा सेवामा आबद्ध
नाम ः भवानी पाण्डे (प्रसिद्ध बालसाहित्यसेवी तथा शिक्षासेवी)
जन्म र जन्मस्थान ः २०३० साल माघ १४ गते, ठूलो पर्सेल — २, तिमाल, काभ्रेपलाञ्चोक
हालको बसोवास ः बनेपा, काभ्रे
शैक्षिक योग्यता ः एमएड (नेपाली)
प्रकाशन ः थरिथरि फूल, प्रकृति नै गुरु, हाम्रो बालक्लब लगायत, विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखरचना प्रकाशित
सार्वजनिक गरिने कृतिका कृतिकारहरू
१. ओतबहादुर खड्का (वेद के भन्छ ?)
२. नवीना श्रेष्ठ (श्रीस्वस्थानी व्रतकथा)
३. केदारनाथ तिमल्सिना (स्पेनको यात्रा)
सम्मान कार्यक्रम कार्तिक २३ गते
शब्दयात्राबाट ‘भर्तृहरि शतक’ छापिने
हरिगोपाल प्रधान सम्मानित